सनराइज बैंकको हकप्रद निष्कासनका लागि वैशाख ३० गते बुक क्लोज ?
ARCHIVE, CORPORATE » सनराइज बैंकको हकप्रद निष्कासनका लागि वैशाख ३० गते बुक क्लोज ?
काठमाडौं - सनराइज बैंकले ३०% हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि वैशाख ३० गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस आधारमा बैंकको हकप्रद सेयर वैशाख २९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र दाबी गर्न पाउनेछन् । सनराइजले १०ः३ अनुपातमा १ करोड ६३ लाख ५९ हजार ६३६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यसमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्दैछ । तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सनराइजले ८५ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
बैंकले चुक्ता पुँजी पनि ५ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसैगरी, रिजर्भ कोषमा पनि २ अर्ब ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ९८ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६ रुपैयाँ ८३ पैसा छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन सनराइजले हकप्रदको बाटो समातेको हो । यसअघि सनराइजले एनआइडीसी क्यापिटल मार्केटलाई पनि एक्वायर गरी एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ ।